Golaha Wasiirada Soomaaland Oo Yeeshay Kulankoodii Ugu Horeeyay. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Hargaysa(FMN)—Kulankii ugu horeeyey ee ay yeeshaan Golaha Wasiirada ee xukuumadda cusub oo uu shir gudoominayey Madaxwaynaha JSL Mudane, Muuse Biixi Cabdi, waxaa lagaga wada hadlay arrimo dhawra. Kulankaas waxaa ka qayb galay 31 xubnood oo ka mida 32-ka xubnood ee golaha wasiiradu ka kooban yahay. Madaxwyne Muuse Biixi Cabdi waxuu kalfadhigaa ka sheegay in xukuumaddaan hiigsigeeda uu saldhig u yihiin Balanqaadyadii iyo Barnaamijkii Xisbigu ku galay ololaha iyo Qorshaha horumarinta Qaran ee labaad (NDPII)
Previous Previous post: DEG-DEG AH:Muusse Biixi Oo Ku Dhawaaqay Golaha Wasiirada Xukumaddiisa.